TCDD waxay heshay warbixin ku saabsan shilka YHT waxayna dhahdaa anigu dambi ma lihin | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWarbixinta Shilka ee TCDD YHT Ma Ahan Dambi
Warbixinta shilka tcdd yht waana ay heshay warbixinta
TCDD, Ankara, 9 qof ayaa naftooda ku waayey shilka YHT ee loo diyaariyay diyaarinta warbixin gaar ah oo 'aan waxba galabsan' ayuu yiri. Warbixinta la sameeyay ayaa lagu helay dambiga sarkaalka u taagaya sarkaalka isagoo wata labo makaanik
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), maalinta December 13, 2018 9 dadka naftooda ku waayey in Tareenku Ankara High Speed ​​(YHT) warbixin gaar ah oo ku saabsan shilka si dhameystiran qoraaga Istanbul Ganacsiga University, ayaa lagu soo bandhigay in ay maxkamadda. Saraakiisha TCDD waxay u arkeen warbixinta mid aan dhammaan.
İsmail Saymaz oo ka socda wargeyska HürriyetSida warku sheegayo; TCDD waxay warbixin gaar ah u diyaarisay Jaamacadda Ganacsiga ee Istanbul oo ku saabsan shilka ku dhintay 9 qof Ankara oo u gudbiyey maxkamadda.
Warbixinta gudiga, qarashka shilka waxaa jaray sarakiil tareeno ah kuwaas oo qabanqaabin kari waayey tareenka iyo labo farsamayaqaan oo dhintay.
Warbixinta ku taariikhaysan 12 Noofambar 2019 ee gudiga oo ay dhiseen Codsi Nidaamyada Nidaamka Gaadiidka ee Jaamacadda Ganacsiga iyo Xarunta Cilmi baarista, Saraakiisha TCDD ee bilaabay ololaha YHT ayagoon dhameystirin nidaamka calaamadaha ayaa la ogaaday inay yihiin kuwa aan cilad lahayn.
MAQAAL SAMEEYAASHA SAXIIXA LACAG LA'AAN
Cusmaan Yildirim, oo ah sarkaal tareen ah oo Ankara ku yimid shaqo ku meel gaadh ah laba bilood ka hor shilka oo loo xil saaray tababar la'aan, ayaa loo muujiyey inuu ahaa dembiilaha ugu horreeyay ee shilka. Yildirim ayaa ka digay in tareenkaasi uu mari doono maqaska, inkasta oo aan la cayimin.
Waxaa lagu nuuxnuuxsaday in farsamayaqaannada aysan garaneynin inay ku sii baxayaan dariiqa qaldan xitaa sababtoo ah fikirka ama dayaca shaqada.
Warbixinta khabiirka ah ee Jaamacadda Farsamada Eskişehir, maqnaanshaha nidaamka calaamadaynta ayaa lagu muujiyay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee shilka. Golaha Baarayaasha TCDD waxay sidoo kale u arkeen agaasimaha Saldhiga Ankara inuu cilladaysan yahay.
TCDD waxay diyaarinaysaa Warbixin ku saabsan Shilalka Tareenka ee kuyaala Corlu!
Warbixin cusub oo ku saabsan shil tareenka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay
Dhibaatada kudhaca dhinacyada Kanada ayaa midba midka kale ku eedeeyaa
TCDD: "Annagu lama wadaagno warbixinta shilka"
Xaaska Ebru Ilisci waxay soo gudbisay cabasho dambi ah oo ku saabsan Maamulaha Guud ee TCDD
Jaamacadda Ganacsiga ee Istanbul
Guddiga Kormeerka TCDD